Madaxweynaha Ukraine oo caawinaad ka dalbaday Donald Trump – The Voice of Northeastern Kenya
Madaxweynaha Ukraine oo caawinaad ka dalbaday Donald Trump
Madaxweynaha waddanka Ukraine Petro Poroshenko ayaa madaxweynaha cusub ee la doortay ee waddankaas maraykanka weydisay caawinaad xili u khadka telefoonka kula hadlaayay si u markaas ugu bogaadiyo xilka dadweynaha Maraykanka ay u doorteen.
Maalqabeynkan loo doortay madaxweynaha Maraykanka ayaa horay u sheegay in u tageeri doono in Crimea ay ka madax bananaato Ukraine inteeda kale waa haddi ay taas u horseedi doonto in cilaqaadka labada waddan u hagaago.
Poroshenko ayaa u hambalyeeyay Trump guusha taarikhiga ah ee u ka soo hooyay doorashada ka dhacday dalka Marykanka taas oo u loolan adag kula galay haweeneyda ahayd murashaxa xisbiqa dimuqraadiga ah.
Waxana wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha lagu sheegay in ay soo dhaweynaayan isla markaana ay bogaadinaayan guusha u gaaray Donald Trump ayna ka filaayan waxyabo dhowr ah oo ay kamid tahay in ay wada shaqeyn dhex marto labada dal ee kala ah Maraykanka iyo Ukraine.
Lbada madaxweyne ayaa heshiiska kuwada gaaray in ay qabtaan kulan laba geesood ah iyadoo aan wax faahfaahin ah aan laga bixinin waxa u kulankaas ku saabsan yahay.
Doorashada Trump ayaa timid iyadoo marar badan ay murashaxa dimuqraadiga ku eedeysay in u daba dhaq u noqon doono xukumadda ka dhisan magaalada Moscow.
Maalinta isniinta ee isbuucan ayaa sidoo kale labada madaxweyne ee Ruushka iyo Maraykanka ay marki ugu horaysy tan iyo marki la doortay Trump ay ku wada hadleen khadka telefoonka iyagoo ka wada hadlay in ay xiriirka wanaagsanaa ee labada waddan ay dib u soo celiyaan.
← Duqa magaalada galbeedka Virginia oo iscasilay
Qarax ka dhacay dalka Afghanistan →